नेपालमा बधुबार १०८१ जना सँक्रमित, थप ६ जनाको कोरोनाबाट मृत्यु
काठमाडौं, २४ भदौं
आज बुधबार नेपालमा १ हजार ८१ जनामा कोरोना (कोभिड १९) भाईरस सँक्रमण पुष्टी भएको । पछिल्लो २४ घन्टामा देशभरका विभिन्न ल्याबमा गरिएको ११ हजार १६७ जनाको पिरिआर परिक्षणमा १ हजार ८१ जनामा कोरोना पुष्टी भएको स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बुधबार नियमित पत्रकार भेटघाटमा बताएका छन् । यो सँगै हालसम्म नेपालमा कोरोना सँक्रमितको सँख्या ४९ हजार २१२ जना पुगेको पनि उनले बताए ।
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना सँक्रमण अझै बढ्दो क्रममा छ । आज काठमाडौं उपत्यकामा ४६४ जनामा कोरोना सँक्रमण देखिएको छ । जसमा काठमाडौंमा ३९४ जनामा, भक्तपुरमा ३६ जनामा र ललितपुरमा ३४ जनामा कोरोना सँक्रमण पुष्टी भएको पनि डा. गौतमले बताए ।
यस्तै पछिल्लो २४ घन्टामा कोरोना सँक्रमणलाई जितेर देशका विभिन्न आईसोलेसन सेन्टरमा ९८१ जना डिस्चार्ज भएको पनि डा. गौतमले बताए । उनका अनुसार यो सँगै हालसम्म नेपालमा कोरोनालाई जितेर ३३ हजार ८२२ जना डिस्चार्ज भएका छन् ।
]यस्तै यतीबेला आज देशभरका विभिन्न आईसोलेसन सेन्टरमा रहेर १५ हजार २५ जनाले उपचार गरिरहेका छन् । त्यसैगरी देशभरका क्वारेन्टाईन ५ हजार ४८० जना रहेको पनि डा. गौतमले बताए ।
यस्तै पछिल्लोे २४ घन्टामा कोरोना सँक्रमणबाट नेपालमा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । मृतकमा ३ जना महिला र ३ जना पुरुष रहेका छन् । महिलामा काठमाडौंको १ जना, कास्कीको १ जना बाँकेको १ जना रहेका छन् । यस्तै मृतक पुरुषहरुमा काठमाडौंको १ जना, अर्घखाँचीको १ जना र नवलपरासीको १ जना रहेका छन् । यो सँगै हालसम्म कोरोना सँक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सँख्या ३१२ जनाको मृत्यु भईसकेको पनि डा. गौतमले बताए ।